Brezila: Diabe ho an’ny Fandriampahalemana Notanterahan’ny Tanora tao Fortaleza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2013 16:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Español, Português
Ny fikambanan'ny tanora Miasa ho amin'ny Fandriampahalemana (Jovens Agentes de Paz – JAP) no nikarakara ity diabe ity, tetikasan'ny Ivon-toeram-piarovana ny Aina – Herbert de Souza izay miorina amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo sekoly, ireo fikambanana isam-paritra, ireo fikambanana tsy miankina sy vondron'ny mpanakanto ary ara-pivavahana. Araka ny nolazain'ireo mpikarakara moa, dia nahatratra 1.500 ireo nandray anjara tamin'ity diabe ity.
Araka ny taratasy misokatra izay mitondra ny lohateny hoe “Fanoherana ny herisetran'ny fanjakana sy ny fandringanana nolazaina mialoha : Andao atao avo ny feontsika mba hiarovana ny aina !” sy ny lahatsoratra ao amin'ny tranonkalan'ny Ivon-toeram-piarovana ny Aina – Herbert de Souza, dia 491 no maty misy ifandraisany amin'ny herisetra teo anelaelan'ny 2007 sy 2010 tao Grande Bom Jardim. Araka io lahatsoratra io ihany, dia nahatratra 186 ireo tanora teo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 19 taona, maty teo anelanelan'ny taona 2007 sy 2009 ; ho an'ny taona 2012 manokana kosa, olona 166 no maty nisy namono tao an-toerana. Raha atao ny karazana fampitahana dia ahitana mponina 204 281 ireo fokontany dimy ireo, ka ny 120 957 amin'izany dia latsaky ny 30 taona, araka ny fanisam-bahoaka taona 2010 teo anivon'ny Ivontoerana Breziliana misahana ny toe-tany sy ny antontanisa (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). Ho an'ny mpikarakara ny diabe, dia maro ny tolona ho fanoherana ny “rojom-panitsakitsahana” [ny zon'ny ankizy], sy ny fanoherana ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra (lazain'ny lahatsoratra fa ankizy mihoatra ny 9 611, adolatsento sy tanora, eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 24 taona no tsy mahay mamaky teny sy manoratra), ny ady amin'ny aretina vokatry ny foto-drafitr'asa sy fitandroam-pahasalamana tsizarizary ary ny ady amin'ny fanerena ny zaza tsy ampy taona, lahy sy vavy hivaro-tena. Nametraka tsikera momba ny fampidinana ny taona mahaolondehibe eo anatrehan'ny fitsarana adi-heloka bevava ao Brezila ho 18 taona ihany koa ity taratasy nomena ireo nanatrika sy nozaraina teny an-dalambe ity:
Nanaraka akaiky ny zava-misy, niaraka tamin'ny fakantsariny ny tanora mpandray anjara iray, Icaro Martins izay nanangana rakitsary tao amin'ny Facebook mba hamoahana ireo sary nandritra ny filaharambe.
Tamin'ny 16 martsa ihany koa, dia nandray anjara tamin'ny filaharamben'ny fandriampahalemana ireo tanora eo anivon'ny tetikasa Luthieria Cultural tao amin'ny zaridaina Sao Vicente, ao amin'ny fokontanin'i Canindezinho. Ny tetikasa Lutheria dia “fisantarana andraikitra ara-javakanto, milalao sy manabe” entina “hampihenana ny herisetra misy ao amin'ny faritra” amin'ny alalan'ny mozika tendrena sy ny fanofanana [ireo tanora].
Tetikasa maro no tanterahina amin'ireo toerana ireo entina hiadiana amin'ny herisetra eo anivon'ny tanoran'ny Grande Bom Jardim. Ho an'i Jari Soares, mpandrindra ny tetikasa Luthieria, dia manana vahaolana lehibe ny hetsika ara-kolontsaina :